Wararka Maanta: Isniin, May 28, 2012-Dagaal khasaare sababay oo xoogag ka kala tirsan Ahlusunna iyo Ximin iyo Xeeb ku dhaxmaray degmada Cadaado
Sida uu HOL u sheegay wariye jooga degmada Cadaado dagaalka ayaa dhacay kaddib markii xoogag ka tirsan Ahlusunna Waljameeca oo ka yimid dhinaca magaalada Gaalkacyo rasaas ku fureen dad rayid ah xilli ay marayeen meel koontarool ah oo looga baxo degmada Cadaado.
"Xoogagga Ahlusunna waxay ahaayeen kuwo kasoo laabtay aaska Sheekh Cumar Sheekh Maxamed Faarax, markii hore si nabad ah ayay ku dhaxmareen degmada Cadaado, laakiin markii danbe oo ay kasoo laabteen Gaalkacyo kuna sii jeedeen deegaannada ay maamulaan ayay rasaas ku fureen dad rayid ah," ayuu yiri wariyaha la hadllay HOL ee ku sugan degmada Cadaado.
Hal ruux ayaa inta la og-yahay ku dhintay is-rasaaseynta dhax-martay labada dhinac, kaasoo sida la sheegay ka tirsan xoogagga Ahlu Sunna Waljameeca, waxaana ay wararku intaa ku darrayaan in ciidamada maamulka Ximin iyo Xeeb la wareegeen hubkii ay ku dagaallamayeen dagaalyahannada ka tirsan Ahlu Sunna Waljameeca.
Illaa hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha maamulka labada dhinac, waxaana degan xaalada goobtii uu dagaallku ka dhacay maanta, walow dadku ay siweyn uga argagaxeen iska horimaadka labada dhinaca.
Maa’aha markii ugu horeysay oo sida oo kale uu dagaal u dhaxmaray labada dhinac, waxaana inta badan warbaahinta laga maqlaa hadalo u badan hanjaabado ay hawada isku mariyaan mas’uuliyiinta iyo saraakiisha labada maamul ee ka wada dhisan bartamaha dalka Soomaaliya.